Lisitry ny Habaka Voaràra ao Okraina: Fepetram-Piarovana Sa Fitaovam-Panivanana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2015 6:13 GMT
Nampiahiahy ny mpisera aterineto ny vaovaon'ny lisitra misy ireo habaka voaràra ao Okraina. Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
Raha nanambara tetikasa hanangana vondrona polisy antserasera vaovao ny Minisitry ny Atitany ao Okraina tamin'ny 11 Oktobra, ny nifantohan'ny tatitry ny haino aman-jery sy ny fanambaran'ny Minisitra Avakov bebe kokoa dia mikasika indrindra ny ady amin'ny heloka antserasera sy ny fanamafisana ny fiarovam-baovao fanaon'ny governemanta Okrainiana. Noraisina ho fahombiazana ny fampahafantarana, rehefa ahitana Okrainiana telo arivo mahery nametraka taratasy fangatahana hanatevin-daharana ny vondrona polisy misahana ny aterineto tao anatin'ny 24 ora voalohany taorian'ny fanambarana. Saingy tao anatin’ ny valinteny mafonja hananganana vondrona miady amin'ny heloka antserasera, dia tsipalotry ny Okrainiana maro ny singam-pisantaran'andraikitra tsy dia ankasitrahan'ny besinimaro.
Miaraka amin'ireo fepetra hafa hanatsarana ny fiarovam-baovao, dia mikasa hametraka lisitra misy ireo habaka sy pejin-tranonkala sakanana noho ny fizarana “votoaty voaràra” ny minisitera.
Sary fanehoana ny fampahafantarana ny polisin'ny aterineto Okrainiana. Sary avy amin'ny mvs.gov.ua.
Ho avy tsy ho ela ao amin'ny polisin'ny aterineto
Fananganana sehatra antserasera ho fisoratana anarana sy mety ho fanakanana ireo loharanom-baovao an'aterineto izay nampiasaina hampielezana na hamoahana votoaty voaràra.
Mampiseho ny fanehoana an-tsary eo ambony, izay nivoaka tao amin'ny habaky ny Ministeran'ny Atitany fa ny habaka tranonkala mampiseho votoaty nopiratena manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona, sary mamoha fady ahitana ankizy, rindram-panimbana sy viriosy ary ny votoaty fisolokiana dia ho ampidirina ao anatin'ny lisitry ny habaka voaràra. Tsy mazava raha ireo habaka media sosialy, izay ahafahan'ny mpiserasera rehetra mamoaka ireo voalaza rehetra ireo sy ireo karazana votoaty hafa no hizaka ny voka-dratsy ho tompon'andraikitra amin'ireo fitaovana ireo – azo ampidirina ao anaty lisitra mainty izy ireo ary akatona manontolo, na afaka mandray fepetra hafa ny manampahefana, manakatona ny pejy misy ny votoaty voaràra ihany. Tsy mazava ihany koa raha takiana hahazo alalana amin'ny fitsarana ny vondrona polisin'ny aterineto vao mahazo mampiditra ny habaka ao anatin'ny lisitra mainty ary avy eo manakana izany, na afaka mampihatra ny fanakanana tsy misy didim-pitsarana.
Efa miasa soa aman-tsara ao Rosia, izay efa maro ny habaka tranonkala, seha-baovao ary pejin-tambajotra sosialy no niafara tao tamin'ny fotoana iray na hafa, ny lisitra mainty an'aterineto. Efa nitatitra ny maro amin'ireny raharaha ireny, ny Akon'ny RuNet ary ireo peijin-tranonkala ireo dia voarara noho ny zavatra rehetra miainga amin'ny votoaty mamoha fady sy ireo sary amboarina malaza ka hatramin'ny “votoaty eksitremista” (sokajy manjavozavo ahitana ny sarimiaina anti-fasista an'i Disney ohatra). Wikipedia, Lurkmore, Facebook, VKontakte, YouTube, ary Google+ dia samy efa hita tao anatin'ny lisitra maintin'ny RuNet avokoa. RosComSvoboda, fisantaran'andraikitra iray mandala ny zo an'aterineto manara-maso ny fameperana votoaty ao amin'ny RuNet, nanombana fa an'hetsiny ireo pejin-tranonkala hita miharihary fa tsy manitsakitsa-dalàna ao amin'ny votoaty no miafara ao anaty lisitra mainty noho ny fanjavozavon'ny lalàna sy ny fampiharan'ny mpandamin-draharaha tsy mazava ny lalàna.
Nahazo ny Iisitra mainty an'aterineto ho azy ihany koa ny Repoblika mpisintaka Entim-Bahoakan'i Donetsk ao Okraina atsinanana tamin'ny Jona 2015 hanakanana ireo tranonkala pro-Okrainianina amin'ny “votoaty voarara ao amin'ny repoblika.”
Tamin'ny Janoary 2014, nandritra ny fihetsiketseha-panoherana Euromaidan, no nandanian'ny mpanao lalàna Okrainianina lalàm-pamerana ny seha-bahoaka an-tserasera sy mampiditra ny fanakanana ny tranonkala, miaraka amin'ireo fepetra maro isan-karazany mametra ny fahalalaham-pitenenana sy ny hetsika fanentanana mahaolompirenena. Ireo andian-dalàna nikendrena hangejana ny mpanao fihetsiketsehana, dia mitovitovy amin'ny lalàna rosiana amin'ny lafiny maro. Avy eo ny filoha tamin'izany fotoana izany Victor Yanukovych nanasoania ny lalàna mba ho azo ampiharina, saingy nahatezitra ny mpanao fihetsiketsehan'ny Euromaidan ireo fitsipika ireo na nampiakatra ny maripanam-panoherana, izay niafara tamin'ny fitsoahan'i Yanukovich sy ny fanesorana ireo lalàna iadiana amin'ny hetsi-panoherana. Raha jerena ny fihetsiky ny Okrainianina tamin'ny lalànan'ny taona 2014, dia heverina ho lavitra dia lavitry ny hahafaly ireo mpiserasera aterineto ity tolo-dalàna hametrahana ny rejisitry ny haba-tranonkala voarara ity.